जनयुद्धले देविलाई दिएको नमेटिने घाउ | Jwala Sandesh
जनयुद्धले देविलाई दिएको नमेटिने घाउ
जितेन्द्र थापा | प्रकाशित मितिः शुक्रबार, असार ३, २०७९ ::: 78 पटक पढिएको |
श्रीमान बचाउन पछि–पछि गएकि उनि उल्टै लखेटिइन्
सुर्खेत : कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिका–८ का देवि परियार र लालु परियार एक असल दम्पती थिए । अझैँ भनौ एक रथका दुइ पाङ्ग्रा जस्तै थियो उनीहरुको परिवार । जीवनभर सँगै जीउँला सँगै मरौँला भन्ने धोको उनीहरुको थियो । देवि र उनका श्रीमान लालुका दिनहरु संघर्षरत यात्रामा अघि बढिरहेका थिए । त्यो बेला देवीका श्रीमान तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीका गाजस प्रमुख थिए ।
आनदोलन सशक्त रुपमा चलिरहेको थियो । देवि सिलाई कटाईको काममै व्यस्त हुन्थिन् । श्रीमान लालु पार्टिको कामसँगै सिलाई कटाईको काम पनि सम्हाल्थे । माओवादीको आन्दोलन चर्किरहेको थियो । दिनहुँ जसो गोला बारुदका आवाज घन्किरहन्थे । गाउँमा आज यो..त्यो.. मान्छेलाई राज्य पक्षले लिएर घाइते बनायो, मा¥यो भन्ने खबर सुनिनै रहन्थे । ति कुराले देविको मनमा पनि अत्यास लागेर आउथ्यो, गोलाबरुदका आवाजले । कतै आफ्ना श्रीमानलाई पनि राज्य पक्षको अपहरणमा पारेर लैजाने त हैन भन्ने कुराले उनलाई दिन रात झस्काइरहन्थ्यो । पिरोलिरहन्थ्यो ।
देविका लागि त्यो दिन टाढा रहेन । नभन्दै श्रीमानलाई सेनाले अपहरण गरेर लग्योे । २०५९ साल मंसिर १७ गते दिनभरी कपडा सिलाई कटाईको कर्म गरेर देवी दम्पती र एक छोरा मस्त निन्द्रामा थिए । बिहानको चार बजेको थियो । ढोकामा ढकढक आवाज आयो । को रहेछ भनेर देविले ढोका खोलिन् । श्रीमान कहाँ छ ? भन्दै चार पाँच जना सेनाहरु घरभित्र पसे ।सेनाले उनको श्रीमानलाई काख बाटै घिसारेर लिए ।
दुई वर्षकोे छोरालाई काखमै च्यापेर उनी पनि पछि पछि लागेर श्रीमान भन्दै रोई कराई गरिन् । स्वास सुख्यो । गला अबरुद्ध भयो । पछि–पछि लाग्न छोडिनन् । उनकै अघि कुट्दै कुट्दै लिएर बिच बाटोमै हात भाँचे, दाँतको बङ्गारा झारे । देविले झनै रोई कराइ गरिन् । तरपनि देविको केही सिप लागेन् । यति गरिसक्दा देविले सक्ने जति रोई कराई गरिन् । ‘अहिले सम्झिदा पनि मन भक्कानिन्छ, यी शव्दहरु भनिरहँदा उनका आँखाभरी आँसु तल्पतिएका थिए ।
‘त्यति गर्दापछि श्रीमान छुटिहाल्छन् कि भन्ने आशले पछि पछि गए, उनले भनिन्, ‘कुट्दै, पिट्दै थिए, आधा ज्यान बाटोमै गइसकेको थियो । अपहरणकारीसँग मेरा श्रीमानलाई मारिसक्यौ अब अन्तिम स्वास घरमै फेर्नदेउ छोड्देउ प्रभु ! भन्दै हारगुहार गरेँ उल्टै मलाई लखेटे, तल–तल लिदै गर्दा नजर पुगुन्जेल हेरिरहेँ । आखिर लिएरै छोडे । क्रुर यातना दिदै दिएरै छोडे ।’
एसएलसी समेत पास देवीका श्रीमान लालु अपहरणमा परेको एक महिनापछि मान्मको राताडावा भन्ने ठाउँमा विभत्स हत्या गरेर वेवारिसे अवस्थामा फालेको लास भेटियो । त्यसबेला देविको सानो छोरा बाहेह परिवारमा अरु कोही थिएनन् । श्रीमानलाई अपहरण गरेको देखेर अरु भएका आफन्त पनि पछि कोहि गएनन् । मरिने डरले । पछि आफ्नै केही आफन्तले लास पाइसकेपछि उतै गाडेर आए ।
छातीको भरमा छोरा हुर्काए
श्रीमानको हत्यापछि देविका दिनहरु निकै संघर्षरत रहे । १६ वर्षको उमेरमा मागी बिवाह गरेकि देविको । २१ वर्षको कलिलो उमेरमै सिउँदोको सिन्दुर मेटियो । त्यसपछिका उनका दिनचर्या कठिन अवस्थामा बिते । घरमा खाने अन्न थिएन । त्यो पल सम्झिदा उनको फेरी गला अवरुद्ध भयो । गुन्यूँका तालले आखाँमा आएका आँसुलाई पुछद्दै उनले भनिन् ।
‘३२ वर्षको कलिलै उमेरमा श्रीमानको मृत्युपश्चात् घरपनि भत्कियो, आफ्नो बस्ने घरको छाप्रो समेत थिएन । अरुकै गोठमा बसेर पनि हिम्मत हारिन । लुगा कपडा सिलाउँदै छोरालाई छातीको भरमा हुर्काए । पतिले सिकाएको सिपको उपयोग गर्दै गाउँ–गाउँ पुगेर कपडा सिलाएर पाएको अन्नपात र पैसाले छोरो हुर्काए । श्रीमानले बिच बाटोमै छोडेर गए पनि श्रीमानले सिकाएको सिपले पल पल याद आइरहन्छ । श्रीमानको याद ताजै लाग्छ । आफ्नै वरिपरि भएजस्तो लाग्छ ।’
‘परिर्वतनका लागि संघर्षमा लाखौ नेपाली आमाका सपुतहरुको बली चढाएपनि माओवादी सत्तामा पुगेपछि आफुहरुको घाउमा मल्हम लगाएको छैन । उल्टै नेपाली आमाका छोराहरुलाई नास्ने मास्नेतिर अघि बढिरहेको छ । माओवादी आन्दोलनको मुख्य उद्धेश्य परिर्वतन गर्न होइन । नेपाली आमाका सपुतहरुको विभत्स हत्याका लागि थियो । स्वार्थ पुर्ति भयो अहिले फर्केर हेर्दैनन्, उनले भनिन् ।
अहिले पनि देवि परियारसँग जग्गाका नाउमा एक चिम्टि माटोसम्म छैन् । आफ्नै हातखुट्टाका नङ्ग्रा खियाएर गुजारा चलाइरहेकि छिन् । बस्नलाई सानो एउटा छाप्रो छ । त्यहि छाप्रोमा एक छोरा बुहारी र नातीनि सहित चार जनाको परिवार बस्दै आएको छ ।
धनयुद्धकै लागि जनयुद्ध
जनयुद्ध र धनयुद्धमा तपाईलाई कुन ठुलो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर थियो ‘धनयुद्धकै लागि जनयुद्ध भएको थियो । परिर्वतनका लागि जनयुद्ध भएको भए त जनयुद्धका लागि सहिद भएका परिवारको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्ने, अहिलेसम्म कसैले घाउमा मल्हम लगाएन् । आफ्नो खुसी खोसिएपछि मलाई कुनै ठुलो लाग्दैन ।’
अहिले उनी ४६ वर्ष पुगिन् । उनीसँग एक छोरा बुहारी र नातीनि छन् । अहिले पनि उनको दैनिकी संर्घषमै बितेको छ । घरखर्च चलाउन अहिले पनि उनी साँझ अबेरसम्म लुगाकपडा सिलाई कटाई गरेर बिहानै गाउँमा निस्किन्छन् । अहिलेसम्म जसोतसो गुजारा गरिरहेको उनी बताउँछिन् । कर्णाली आफैमा गरिब प्रदेशका रुपमा चिनिन्छ । कर्णालीका धेरै नागरिक पीडा अभाव र बेरोजगारीमा छट्टटिएका छन् । जनयुद्धमा आफ्ना आफन्त र घरपरिवार गुमाएका कर्णालीबासीलाई अहिले दिनमा दुई छाक टार्न पनि मुस्किल छ ।
युद्धको पीडा परिवारमा मात्र नभई हरेक दिन छ
बुबाको त्यो मृत्युको खबरले छोरा भरत परियारको मन भक्कानिएर आउँछ । दुई वर्षको दुधे बालक । त्यसमाथि दुध खाँदै गरेको अवस्थामा सेनाले अपहरण गरेर लिएको थियो । सबैले बुबा बुबा भन्थे । विद्यालय जाँदा बुबाको हात समाएर विद्यालय जाने बेला बुबाको यादले पिरोल्थ्यो भरतलाई । सबैजना साथीभाई आफ्नो बुबाको हात समाएर विद्यालय जान्थे । कहिले घुम्न जान्थे त्यो बेला भरतको गहभरी आँसु झर्थे । तर पनि मन बुझाउँथे । बुबाले दिने माया आमाबाट पाएको छु भनेर मन बुझाउँथे ।
‘गाउँघरमा जसोतसो पेट पाल्न समस्या हुँदैन । तर पनि घरमा आमा श्रीमति र एक छोरी छन्, म पढ्दै छु । आवश्यकता बढ्यो । खाने मुख थपिए,’ उनले पीडा सुनाउँदै भने, ‘युद्धको पीडा परिवारमा मात्रै कहाँ छ र ? हरेक दिन आइपर्ने समस्यामा पनि अभावले पिरोल्ने रहेछ ।’ व्यवस्था परिर्वतनका निम्ति पुराना शासक त फालियो तर फेरी नयाँ शासकको उदय भएको उनको बुझाई छ ।
सर्वहारा वर्गका समस्या ज्यूँका त्यूँ
२०५२ सालदेखि २०६२/०६३ सालसम्म नेपालमा सशस्त्र द्धन्द्ध भयो । कैयाैँ बस्ति जले । कैयौँ घरहरु जले । कैयाँै आमाले सन्तान गुमाए । कयौ घाइते अपाङ्ग तथा बेपत्ता पारिए । वेपत्ता भए । पुरानो व्यवस्था फालेर नयाँ व्यवस्था ल्याउनलाई कैयौ नेपाली सहीद हुन तयार भए । पुरानो व्यवस्था त फाले । नयाँ व्यवस्था आए पनि नेपाली आमा खुसी छैनन् । अहिले पनि गरिब निमुखा र सर्वहारा वर्गका समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।
माओवादी सत्तामा थिएन । जनयुद्धमा कैयौँ आशाहरु देखाइयो । जब माओवादी सरकारमा पुग्यो । सरकारमा पुगेपछि गरिब निमुखाका समस्यालाई नहेरेर आफ्नै वरिपरिका आसेपासेलाई मात्र पोछ्न थालियो । जसले गर्दा सर्वहारा वर्गका समस्या ज्युँका त्युँ रहे । नेपाली आमाका हजारौँ छोराछोरीको रगतको खोलो बग्यो । तर के पाए जनताले । आफन्त गुमाएको त्यो घाउ अहिले पनि ताजै छ । भुल्न सकेका छैनन् । कोही दिनरात बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्त फर्किने आशमा छन् । आफन्त गुमाएकाहरु सम्झनामै दिनहरु बिताएका छन् ।
पर्यटकलाई लोभ्याउदै सल्यानका पर्यटकीय क्षेत्र, पर्यटकको आर्कषण बढ्दो
खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना हुने
चुनावअघि खुट्टा ढोग्ने नेता, चुनावपछि हीरा बनेर बिलाउँछन्
दुधे बालक पिठ्युँमा बोकेर चुनावी मैदानमा बसन्ती